Savings Calculator - Quit Partner
Soo Gudbi Bukaan
Guud-marka Barnaamijaka Dhalinyarada Khadka-Iska-Joojinta Hindida Mareykanka (American Indian Quitline) Cafimaadka Hab Dhaqanka Barnaamijka Uur Lahaanta Caawimaada Caafimaadka
Guud-marka U Diyaar Garowga Xisaabiyaha Keydka Wadida Iska Joojintaada U Dabaaldegidda Guuleysiga Wadaag Sheekada Iska Joojintaada Qoyska iyo Asxaabta Walxaha Mentholka ah Daawooyinka Iska-joojinta Lacag la’aanta ah
Guud-marka Bixiyayaasha Daryeelka-Caafimaadka Shaqaalaha Wax-Barayaasha Qabanqaabiyayaasha Bulshada
Talo iyo Taageero Xisaabiyaha Keydka
Immisa Lacag Cadaan/Kaash ah Ayaa Keydsan Kartaa Adigoo Iska Joojiya Sigaar Cabida?
Eeg tusaalaha hoos ku qoran. Ma rabtaa inaad aragto tirada doolarka ah ee Iska Joojintaada? Kaliya ka jawaab labada su'aalood ee hoos ku qoran si aad u aragto inta ay boorsadaadu buuran doonto ka dib marka aad ka guuleysato nikotiinka.
Immisa ayaad caadi ahaan ku bixisaa baakad sigaar ah, e-juuska ama Pod-ka, ama tubaakada la calaanjiyo?
Immisa baakado, Pod-yo ama tubaako ayaad iibsataa halkii toddobaad/usbuuc?
Immisa baakado, Pod-yo ama tubaako ayaad iibsataa halkii toddobaad/usbuuc? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Keydinta Toddobaad Kasta
Taasi waxay ku filan tahay inaad ku iibsato kaarka Metro Transit (Tareenka) ee bisha oo dhan.
Kaydinta Bil Kasta
Taasi waxay ku filan tahay kharash-ku-bixinta gaari cusub.
Kaydinta Sannad Kasta
Taasi waxay ku filan tahay inaad ku bixiso bilooyin ijaarka guriga ah ama kharashka daynta/morgijka guriga.
Ama wac: 1-800-784-8669 si aad isugu diiwaangeliso Af Soomaali.
Xuquuqda daabacaadda © 2021 Waaxda Caafimaadka ee Minnesota